Ahịa Ahịa Ahịa Maka Ndị Malitere - Mee Oke Uru! Ọnwa Abụọ 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Ahịa Action Trading!
Ahịa ahịa azụmaahịa na ebe a na-azụ ahịa ahịa na-ejupụta na atụmatụ. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-elekwasị anya na ịkpụchapu obere uru, ndị ọzọ na-ele oge ọkara. Kedu ụzọ ọ bụla - ha niile nwere otu ihe. Nke ahụ bụ ịsị, ndị ahịa nwere oge ga-eji ihe ngosipụta dị elu dị elu na ngwa ọgụgụ eserese.
Agbanyeghị, oge ụfọdụ ọ kacha mma ịlaghachi azụ ma lelee naanị ihe dị n'ihu gị - etu a. A maara nke a dị ka 'ahịa omume ahịa'. Site na ịlaghachi na isi - ị na-eguzo ohere kachasị mma iji nweta ọrụ ịzụ ahịa n'ịntanetị na ụkwụ aka nri.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara azụmaahịa ọnụahịa. Na njedebe nke ịgụ ya, ị ga-enwe ngwa ọrụ niile achọrọ iji bido azụmaahịa na njikwa ihe nkwụ ụgwọ-ụgwọ kwesịrị ekwesị!
Otu n'ime ihe kachasị mma banyere ịlele ọnụọgụ ego nke ihe bara uru na oge a kara aka bụ na ị nwere ike ịnweta ọtụtụ ozi bara uru dị ka mgbanwe ahịa, nkwụsịtụ, na ọnọdụ - n'ụzọ na-arụpụta ihe.
Kama iji ihe ngosi ntanetị, ma ọ bụ akara ngosi eserese - ahia ọnụahịa bụ maka ịbịaru isi ahia, yabụ ị ka mma ilele nke a anya n'oge akọwapụtara dị ka n'elu.
Formdị nyocha ọzọ nke ọnụahịa bụ eserese kandụl ndị Japan - ebe a, kama ịkọ ọnụahịa otu, nke a ga-enye gị echiche jikọtara ọnụ nke imebi akụkọ dabere na mkpali na ọnụahịa.
Actiongwọ Ahịa Ahịa Adabaghị
Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị ida ego, dị ka a ahia, otu n'ime gị kasị mkpa ọrụ bụ ifịk ifịk jikwaa ihe ize ndụ site na-emechi ahia ma ọ bụrụ na ị chọrọ. A na-emegharị ọtụtụ ijeri kwa ụbọchị site na ahịa, nke ndị na-anaghị eche echiche. Ka o siri dị, ọ bụghị ezigbo echiche ịkọ nkọ na ime oke mmeghachi omume.
Dịka onye na-azụ ahịa, ịnwere ike inweta nghọta dị mma banyere njikwa ihe egwu, nke ga-abụ ezigbo ihe bara uru iji bụrụ ezigbo ahịa n'ọdịnihu. Omume ọnụahịa na-eleba anya na isi obodo ọ bụla, n'ụwa niile, n'oge niile, ihe zuru ezu nke ihe ahịa ahịa gị na-egosi na eserese gị.
Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike bụrụ ihe gbasara ụlọ akụ na-anwa ijikwa ikpughe ego ha. O nwere ike ịbụ nnukwu ụlọ ọrụ amaara ama na UK na-azụta kamera si Japan (ego JPY), ma ọ bụ mkpuchi mkpuchi na-anwa iweghachi pọtụfoliyo ya na ngwụcha ọnwa.
Mmetụta Mmetụta - Ihe niile Need Kwesịrị Knowma
Na nkenke, a na-eji echiche ihe egwu gosipụta otu ahịa azụmaahịa (ndị na-ekere òkè) na-adị ma na-eme ihe. Ihe ndị ahịa kpebiri ire ma ọ bụ zụta, bụ ezigbo ihe na-egosi ego ole ha tụrụ anya na ha ga-eme, yana ego ole ha dị njikere ịfu.
Mmetụta echiche dị oke mkpa bụ nkwupụta nke oke ihe ọghọm ndị ọchụnta ego na ndị ahịa dị njikere iwere. Ihe nyocha ihe egwu di ka ihe ndi mmadu na-acho ahia ego. Site na ịmara onwe gị n'àgwà ahịa dị ka ihe ize ndụ n'ozuzu ya, nke a ga-enye gị echiche banyere ọtụtụ ihe egwu ị nwere ike ịdị njikere iji akụ gị na ego gị n'ime oge akọwapụtara
N'ezie, nkọwa nke ihe egwu bụ ikpughe ihe egwu ma ọ bụ mfu - yabụ mgbe ị nwetara ọnọdụ ghere oghe n'ahịa, enwere ihe egwu na azụmaahịa gị nwere ike ịkwụsị na mfu. A na-amarakarị na mgbe ọ bịara n'echiche nke onye na-azụ ahịa, enwere isi adịghị ike abụọ na-eduzi usoro mkpebi.
Ha bụ anyaukwu na ụjọ - ahịa ego nwere ike ọ ga-egwu na nke ahụ.
A na-ekwu ọtụtụ n'ime ọrụ na ahịa ego dabere na obere oge, yabụ na ị nwere ike ịpụ ngwa ngwa yana ịbanye ahịa. Maka nke a, anyị chere na ọ dị mkpa ịghọta nke ọma ihe mmetụta dị n'ihe egwu bụ. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ na-akọwa omume nke itinye ego na ndị ahịa, na ha nwere ike 'na-achọ nchekwa' ma ọ bụ 'na-achọ ihe egwu'.
Mgbasa ego na-ejikarị okwu ahụ bụ 'ihe ize ndụ' na-ezo aka na gburugburu ebe obibi mgbe ahịa 'na-achọ ihe ize ndụ'. Mgbe ahịa na-egosi ihe ngosi nke ntakịrị nke volatility na ọnụahịa - ma elu na ala - na data akụ na ụba na-akwado nke a, a na-ahụta atụmatụ dị ka nkwa - yabụ nke a pụtara na ihe egwu dị 'na'.
Mgbe enwere ọnọdụ 'ihe ize ndụ', ndị ọchụnta ego na ndị ahịa na-enwekwu nchekwube maka ịchọ nlọghachi dị elu, nke nwere ike ịpụta ikekwe ịre 'akụ', ma ọ bụ ịzụta 'akụ dị egwu' - nke bụ ịtụgharị isi obodo na 'ihe egwu '.
Fọdụ n'ime akụ ndị dị ize ndụ bụ ndị a:
ego di elu (uzo abuo bu; Australian dollar na Brazil real)
ọla dị oké ọnụ ahịa
na (ihe ijuanya) ebuka.
Dịka ihe ọ bụla na ndụ, ka ị na-enwekwu ihe egwu ị na-enweta, ọ ga-eme ka nlọghachi gị dị elu. N'ezie, nke a pụtakwara na ị na-etinye ya n'ihe ọghọm n'ụzọ ọzọ.
Gịnị bụ Egwu-Off?
Mgbasa ego na-eji okwu ahụ 'ihe ize ndụ' na-ezo aka na gburugburu ebe obibi mgbe ahịa 'na-achọ n'enweghị nsogbu'.
Ọ bụrụ na ahịa na-egosi oke volatility, na amụma akụ na ụba na-egosi na ọ dị njọ ma ọ bụ na-akawanye njọ mgbe ahụ a na-ewere ihe ize ndụ dị ka 'ihe ize ndụ'. Nke a pụtara na ndị ahịa agaghị enwe ike ịme ahịa dị ize ndụ.
Nnukwu ihe omume dị ka nnukwu nsogbu ego (2008), ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ọgba aghara Middle East, na-aga n'ihu), ma ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya nsogbu ahụike zuru ụwa ọnụ COVID-19 (2020) niile ga-enwe oke mmetụta na-adịghị mma n'ahịa - n'ihi ya, echiche ahịa ga - abụ 'ihe ize ndụ'.
Ndị ahịa na-aghọ oge ụfọdụ, ihe a maara dị ka, 'ihe ize ndụ-ịjụ', mgbe nke a mere, enwere nhọrọ nke omume abụọ ha nwere ike ime. Ndị ahịa nwere ike ịbanye ọnọdụ (zụrụ) n'ime 'akụ na ụba nchekwa', ma ọ bụ ọnọdụ ọpụpụ (ree) n'ime 'akụ egwu'. Mgbe ahịa siri ike, ndị na-etinye ego na ndị ahịa ga-achọkarị 'ebe nchekwa', nke a na-echekwa karịa, ọ bụrụ na akụnụba na-akawanye njọ.
Ndị ahịa a na ndị nwere ego nwere ike ime ka isi obodo ha bụrụ akụ 'nchekwa'. N'aka ozo, 'onodu ihe ojoo' na abia obere ihe egwu, kamakwa ugwo olu di ala. A na-ahụkarị ịme nke a dị ka usoro kachasị mma iji chebe isi obodo n'oge ụjọ, ma ọ bụ 'ịtụ egwu'. N’ikwu ihe ndị a niile, a na-ewere ego siri ike dị ka ebe kacha mma nchekwa dị.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ego dịka ebe nchekwa gị, ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ gụnyere;
Franc franc (CHF)
US ọchịchị nkekọ
ọla edo (XAU)
Ọ bụ ezie na ebuka dị n'etiti ndị na-azụ ahịa na ndị ọrụ nlekọta ahụike na-ahụta dị ka ebe nchekwa maka ndị na-ere ngwaahịa (nke a na-akpọ 'akụ na-echekwa').
Ihe kpatara eji ele ngalaba ndị a anya dị ka ebe nchekwa bụ na adịghị mkpa maka ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'etiti ngalaba ndị a na-enye ngwaahịa ndị dị mkpa ndị mmadụ chọrọ mgbe niile.
Mmetụta Ahụ Egwu Ọ Dị Mkpa?
Ee, echiche ihe egwu dị oke mkpa, ịnwe nghọta dị mkpa banyere nke a ga - enyere gị aka ijikwa mmetụta na ihe egwu gị, ọ ga - enyere gị aka ichekwa isi obodo gị. Ahịa ndị ahụ ga-agbago na ala kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa izu, nke a bụ ezigbo ihe ngosi nke mgbanwe n'echiche dị egwu - nke a kwesịrị inyere gị aka ịghọta nke ọma ihe kpatara ahịa ji arụ ọrụ otu ọ dị.
Mmetụta ihe egwu nwere ike gbanwee nke nta nke nta, ma ọ bụ oge ụfọdụ na oke ọsọ ọsọ. Ihe omuma a ma obu obuna ihe omuma banyere nsogbu g’enyere gi aka ichota ozi ego, data aku na uba, ma di nwayo n’iru ngbanwe. Ahịa nwere ike ịgbanwee ngwa ngwa n'ọnọdụ 'ihe ize ndụ', mgbe ị gachara 'ihe ize ndụ' ruo ọtụtụ ụbọchị, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ọnwa. Inyocha akụkọ ahịa site na iji echiche dị egwu ga-enyere gị aka inwe nghọta nke mgbagwoju anya na enweghị nghọta nke ihe omume na akụkọ ahịa.
Ọ bụrụ na enwere ntọhapụ akụnụba akụ na ụba na-erughị ala ma a bịa n'ịme ka ọnọdụ akụ na ụba ka mma, enwere ike ịmetụta mmetụta dị egwu. Yabụ, mmetụta nke akụkọ a ga - eme mgbanwe na ntụgharị uche nke ihe egwu ahụ, yabụ ahịa nwere ike ịga n'ihu ịzụta akụ dị egwu ma leghaara data ahụ anya.
Ihe ọzọ nke nwere ike inwe mmetụta dị oke mkpa n'echiche ihe egwu dị njọ karịa nsonaazụ na-atụghị anya ya. Nke a bụ ntọhapụ data gburugburu ebe obibi (dị ka NFP) na-ezo aka na mpaghara na-adalata ma ọ bụ ahịa.
Isi obodo ga-aga na akụ na-enweghị nchebe, site na ihe egwu - yana mmetụta egwu nwere ike ịgbanwe 'n'ihe ize ndụ', site na 'ihe egwu'. Ozugbo ahịa ndị ahụ na-aga n'ọnọdụ 'ihe ize ndụ', udele ahụ ga-adị na prowl, na-ere ihe ndị dị ize ndụ ma na-ejide akụ dị mma. N'ọnọdụ kachasị njọ, ọnụahịa ga-ada, na ngwa ngwa - ọnọdụ kachasị mma bụ na a ga-ejide ọnụahịa azụmaahịa gị, na-akwụsị isi ọ bụla.
Echiche Mmetụta Egwu
Iji hụ na ị nwere ike ịghọta n'ụzọ zuru ezu mmetụta nke echiche dị n'ihe egwu, n'okpuru anyị depụtara ụfọdụ usoro ụzọ dị mkpa ịchọrọ iji lezie anya mgbe ị na-azụ ahịa na ọnọdụ ndụ - na agbanyeghị ma ị nọ na gburugburu 'ihe ize ndụ' ma ọ bụ 'ihe ize ndụ'
Ma ọ bụghị nke a maara dị ka VIX; nke a na-atụle ahịa ndị akọwapụtara na enweghị nsogbu, yana nke puru omume nke ịme njem na-atụghị anya ya ma ọ bụ na mberede na ọnụahịa.
VIX ga - enyere gị aka ịghọta ọkwa dị egwu (ma ọ bụ na ịgbanwuo) na ebuka. A na-akpọkarị VIX Index dị ka 'ntụpọ egwu' ma ọ bụ 'nlele egwu'. O bukwa used iji chọpụta ọkwa nke ahịa site na ndị na-ere ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa nhọrọ. Dika odi, nke a bu otu n’ime ihe omuma nke amara na ahia n’ozuzu ya.
VIX dị ala, obere ahịa ga-atụ egwu, VIX dị elu, ka ahịa ahụ ga-atụkwu egwu.
A na-atụ anya atụmanya ahịa nke volatility na-aga n'ihu tụrụ na Index S&P. Ihe atụ FOo, ọ bụrụ na VIX na-enye uru nke n'okpuru 20, a na-ewere ya dị ka nke dị jụụ, ebe a na-ahụ uru karịa 30 ka ọ dị nro.
Ndepụta Ngwaahịa US
Ntughari ahia a bu otu n'ime ihe kachasi nke oma barometres iji lelee anya.
Otu n'ime ihe ndepụta US zuru oke bụ;
DJIA (Dow Jones Industrial Nkezi)
Ndekọ ndị a bụ ihe na-egosi maka akụ na ụba ụwa niile, ọ bụghị naanị US
Nwere ike ịchọta akụkọ banyere ntuziaka nke ndepụta ndị a, ọtụtụ oge n'ụbọchị site n'iji ya abanye na ntanetị mgbasa ozi ego dịka Bloomberg na CNBC. Mgbe akpọrọ index index dị ka 'down', nke a pụtara ọghọm ma ọ bụrụ na 'apụ', n'aka nke ọzọ mgbe ha 'toro', ihe ọghọm dị na 'on'.
Njikọ Gọọmentị US
Ezoputara dị ka Akụ US, Ngalaba Akụ US ga-ewepụta agbụ ya n'afọ niile. A ga-ewepụta gị iji nweta ego iji kwado ọrụ ma ọ bụ ọrụ kwa ụbọchị. N'ihe banyere itinye ego, a na-ahụta ụlọ akụ US dị ka ihe dị nso na enweghị ihe ọghọm dịka ị nwere ike ịnweta, nke mere na a na-echekarị ha dị ka akụ na-enweghị nchebe.
E nwere ụdị nchekwa atọ a na-enweta ego iji kwado ego nke gọọmentị US, ndị a bụ:
Onye ọ bụla n’ime ha na-akwụ mmasị n’ụzọ dị iche, nke ọ bụla n’ime ha na-enwekwa ntozu okè tozuru etozu, nke a nwere ike ịbụ ihe dị ka izu anọ ruo mgbe ụfọdụ afọ iri atọ. Iji mee ka ị mara, ị ga-ahụ akụkọ gbasara mkpụrụ nke ọ bụla n'ime ndị a ga-akọ na mgbasa ozi ego.
Mgbe mkpụrụ dị elu, ị nwere ike ijide n'aka na ahịa na-ere ụgwọ gọọmentị US. Nke a bụ n'ihi na ịme nke a, ọnụahịa ndị ahụ ga-ada, nke pụtara na ha na-amịpụta mkpụrụ ha. Mgbe a na-ere ihe na-enweghị ihe ọghọm dị ka nke a, ọ pụtara na ha na-enwe mmetụta dị mma maka ya, yabụ mmetụta ebumnuche na-agbanwe site 'n'ihe ize ndụ' gaa 'n'ihe ize ndụ'.
Ọ bụrụ n ’aka nke ọzọ na-eweta ala, nke abụghị eziokwu, ihe egwu nwere ike ịgbanwe‘ n’ihe ize ndụ, maka na ọ bụ ihe ịrịba ama nke ụjọ, maka ahịa na-azụta ụgwọ gọọmentị kama Ọ na-amanye ọnụ ahịa ịrị elu, nke n'aka nke ya ga-ebelata mkpụrụ.
Ego Ego nchekwa
Ego echekwara echekwa ga-eme ngwa ngwa maka mgbanwe mmetụta, n'ihi na ha nwere nnukwu mmetụta na mgbanwe ndị a - ego ndị a na-atụ anya maka uru ọ ga-abawanye, ma ọ bụ jigide uru ya na gburugburu 'ihe ize ndụ'.
Will ga-enwe ike ilekwasị anya n'ihe mmetụta dị egwu 24 awa kwa ụbọchị n'ihi na n'adịghị ka ngwaahịa ngwaahịa US, oghere oghere na-emeghe 24/7.
Switzerland franc (CHF) siri ike. Agbanyeghị na ahịa azụmaahịa ụwa ezutela ọtụtụ nsogbu na afọ ndị gafere, Switzerland na-ejidesi ha ike.
CHF bụ ego dị nchebe maka akụ na ụba na-adịgide adịgide, nkwụsi ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na amụma ego na amụma ego. Ọbụna ndị amarala na ndị na-achụ ego mba ụwa na-atụgharị na Switzerland n'oge nsogbu ego.
Ihe ngosi doro anya na enwere nsogbu nke ahịa (na-abụkarị na Europe), bụ mgbe CHF dị ike karịa ego na-ekwenye ekwenye. Nke a ga - edugarị ndị na - azụ ahịa ego ka ha gbaba na nchekwa nke CHF.
Omume a gosipụtara gburugburu 'ihe ize ndụ'.
Nke a bụ ezigbo ihe atụ nke mmetụta 'ihe egwu', n'ihi ike nke USD. Ọ bụrụ na akụkọ ahụ na-akọ na USD dị ike karịa nnukwu ego na-enye ego, site na akụkọ niile, ahịa ahụ agaghị ewe iwe na akụkọ ego na data akụ na ụba na-adịbeghị anya.
Nke a ga - ebute ahịa na - achọ USD ka ebe nchekwa. Ka ị nwee ike ịzụta ụlọ akụ US dịka ebe nchekwa gị, ị ga-azụrịrị ụfọdụ USD (ma ọ bụrụ na ịnweghị ụfọdụ). Ọnụ ego USD ga-ebili mgbe ọtụtụ ndị na-etinye ego na-eme nke a n'otu oge.
Nke a bụ ihe atụ ọzọ nke mmetụta 'ihe egwu'. Yabụ, ọ bụrụ na akụkọ ahụ na-ekwu na Yen ndị Japan siri ike karịa ego na-ekwenye ekwenye - ọzọ, ahịa nwere ike iwe na data ma ọ bụ ozi ọma, ma eleghị anya na-achọ JPY dị ka ebe nchekwa (ọkachasị ma ọ bụrụ na akụkọ ahụ metụtara USD) .
Abụọ nke ego abụọ ọ dị mma ilekwasị anya na NZD / JPY anyị na AUD / JPY. N'ụzọ dị oke mkpa, ụzọ abụọ a bụ ahịa 'ebu' (nke a ga-ezo aka dị ka ihe egwu na atụmatụ). Mbupute na mberede na ụzọ abụọ ego abụọ a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke iyi egwu dị egwu.
Ebe enweghi oke amụma n'ime ụwa ugbu a, a ga - enwekarị mgbapụ na nchekwa, ikekwe USD, JPY na CHF. Mgbe NZD / JPY na AUD / JPY bụ o ịrị elu, nke a bụ ihe doro anya na-egosi na nyocha ihe egwu dị ugbu a 'dị ize ndụ'
Onweghị ihe dị 100% Risk-Free
O wutere anyị ịhapụ gị ya, mana ekwesịrị ikwu na, dị ka unicorns, ihe ọghọm na-enweghị ihe ọghọm dị 100% ọ bụghị adị. Enweghị ihe ọ bụla nke ga-adị mma na-adịgide adịgide ma ọ gaghị ekwe omume ị bụrụ 100% 'ihe ize ndụ'.
Abia na otutu ego siri ike, di nwute, you ka no n’iru ihe egwu nke ike izuta ike jiri nwayọ nwa n’efu. Ihe ize ndụ ahụ ga-adị mgbe niile - N'ezie 'ihe ize ndụ' na 'ihe ize ndụ' bụ naanị okwu iji kọwaa ọnọdụ ahịa.
Ya mere na ọ nwere ike ịkọwa ụzọ na ịchọpụta ihe nwere ike ime n'ọdịnihu, nyocha nyocha bụ nyocha nke omume ọnụahịa na akụkọ ntolite. Iji chọpụta usoro na ohere nke mmegharị n'ọdịnihu. Nyocha Nka na ụzụ na-eji eserese ọnụahịa dị ka ụzọ isi chọpụta oge, nkwado na nkwụsi ike. Nke a na-enyere ndị ahịa aka ịbanye na ịpụ ahịa nke nwere nnukwu ohere.
Ọtụtụ mgbe, usoro guzobere ga-esochi mmegharị ọnụahịa na ọnọdụ na-apụta. Thekpụrụ e guzobere bụ akụkụ nke ekele maka ahịa ọgwụ. Echiche bụ na ndị otu nọ na ahịa ga-emeghachi omume n'ụzọ yiri nke ahụ mgbe ha chere ọnọdụ yiri nke ahụ ihu. Nyocha teknụzụ na-eji ihe ngosipụta teknụzụ na eserese ọnụahịa iji hụ usoro ọ bụla, enwere ike iji ya dị ka ntọala maka mpụga / ntinye. Nyocha teknụzụ agaghị anwa tụọ uru bara uru bara.
Nnukwu ihe dị iche na nyocha dị mkpa na nyocha nyocha bụ na nyocha nyocha nwere ike iji oke akụkọ ihe mere eme na data ọnụahịa, ebe nyocha bụ isi enweghị ike. Nchọpụta nka na ụzụ na-elekwasị anya na ọdịnihu, yabụ nyochaa akụkọ ihe mere eme nke omume ọnụahịa na-etinye ya n'ọnọdụ dị ukwuu maka ịkọ mmegharị ọnụahịa na omume azụmaahịa nke ọdịnihu.
Ndị mmadụ na-ekwenyekarị na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na-ejikarị nyocha ọfụma eme ihe, na usoro ọnụahịa ga-abụkarị ịmeghachi onwe ha ala. Nke a na-enyere ha aka inyocha ụzọ ego na mmegharị ego ọ mere n'oge gara aga - a ga-elele ozi a mgbe ị na-eme mkpebi ịpụ ma ọ bụ banye n'ọnọdụ.
Isi okwu maka nyocha oru bu na karia itinye uche na onu ogugu nke onu ahia, onu ahia nwere ike igosiputa ihe omuma di. Nyocha nke ọkọnọ nke ahịa na ọchịchọ ga-ekpebi usoro ụzọ ọnụahịa ga-aga.
Nkwupụta bụ isi nke nyocha nyocha bụ ndị a:
Ndị ahịa nwere ike ịhụ ma ọ bụ ire ire, ma ọ bụ ịzụ ọmụrụ nwa na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata.
Na-enwe ike ikwubi ihe ị chere na ndị sonyere na ahịa ahụ nwere ike ịhazi na-eme ọzọ
Have nwere nghọta ka mma banyere ihe ndị na-ere na ndị na-azụ ahịa nwere ike ịdị na-eche, n'ihi ọhụụ a na-ahụkarị.
Ihe nyocha a dabere na ụkpụrụ ato a:
Nddị na ọnụahịa na-akpali
A ga-etinye 'isi', ma ọ bụ ọnọdụ akụ na ụba na-akpaghị aka n'ime ọnụahịa ego ego. Ahịa na-egosi ihe niile. A ga - etinye ihe omume dịka akụkọ gbasara ọrụ na ọnụego ọmụrụ nwa na ọnụahịa na - akpaghị aka, n'ihi ndị na - azụ ahịa na ndị na - ere ahịa n'ime ahịa.
A na-echekarị ya na usoro ọnụahịa, akụkọ ihe mere eme bụ ezigbo ihe na-egosi ihe ga-abịa, yabụ ha na-alaghachikarị.
Ebumnuche Nyocha Teknụzụ
Iji lelee ọnụ ọgụgụ na usoro ahịa ọ bụla na-apụta, na inweta uru site na ahia.
Mgbe ahịa malitere ịgbanwee, nyocha teknụzụ ga-ama mgbe ịbanye ma ọ bụ pụọ na ahịa ahụ.
Iji mee mkpebi ziri ezi na ahia, na-enweghị nchebara echiche.
Yabụ, ogologo na mkpụmkpụ ya bụ, na nyocha teknụzụ ga-amata usoro, na-esote nkwado na nkwụsi ike nke ahịa ahụ. Nke a bụ site na iji oge, ma ọ bụ chaatị ọnụahịa.
N'ụzọ bụ isi, mgbe a bịara n'ahịa, ha nwere ike ịnwe naanị nhọrọ atọ - gbadaa ala, gbagoo, ma ọ bụ gaa n'akụkụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọnụahịa ga-aga na zig-zag, n'ihi ọrụ ọnụahịa a nwere naanị 2 na-ekwu:
Trend: Ahịa zig-zag ala na a downtrend ma ọ bụ karịa na ihe uptrend.
nso: Ahịa zig-zag iwepu.
Nka na ụzụ nyocha jiri ụdị ọrụ atọ dị iche iche:
Nka na ụzụ Indicators: ịzụta na ire ere, na iji ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ.
Kpụrụ Chaatị: Na-ebu amụma ebe ọnụahịa na-aga site na ịchọta usoro usoro eserese.
Ahịa Action: Ihe osise eserese wdg iji mata ihe ahịa na-aga, nke a na-eme site n'inyocha mmegharị ọnụahịa gara aga.
Ya mere, na-ajụ ajụjụ - ọ bụ nyocha ọrụ ọrụ dị mkpa n'ezie? Na ngalaba na-esote, anyị na-enyocha echiche a n'ihu.
Nyocha Nkà na ụzụ dị mkpa?
Ee, ọ bụ. Nyocha oru nka apughi inyere gi aka ikpebi ebe na mgbe isi puta na ahia kamakwa ebe ma obu mgbe i ga abanye ya.
Site na ichota usoro nke oge gara aga nke nwere ike ikwughachi, nyocha oru oru bu ihe enyere aka ma achota ihe puru ime na ichota ahia di nma.
O siri ike ịnwe uru n'oge niile dịka ọ dị, mana na-ejighị njikwa ihe egwu, anyị ga-asị na ọ dị nso agaghị ekwe omume.
Kpụrụ Chart bụ isi ihe dị na nyocha ọrụaka; na-eji ọtụtụ akụkụ ma ọ bụ ahịrị, ụkpụrụ eserese bụ ngosipụta eserese nke mmegharị ọnụahịa. Ihe ndị dịka omume mmadụ nwere ike ibute mgbanwe na ọnụ ahịa akụ na ụba, usoro ndị a bụ ihe ndabere nke nyocha teknụzụ ma nyere aka chọpụta mmegharị omume na ọnụahịa nke akụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa onwe gị, ị ga-amara na ịnwe nka na nghọta nke otu esi ahụ usoro ga - eme ka ohere gị nwere ịchekarị ebe ọnụ ahịa a ga - aga. Chartdị eserese a na-ejikarịkarị bụ akara ngosi, mana enwere ndị ọzọ, dịka pennants, flags, wedges, okpukpu abụọ na atọ (na ala), na isi na ubu.
Okwesiri ighota na enwere ike ichota usoro na oge obula site na sekọnd rue ọnwa, mgbe ufodu, akọrọ ga-agbakwunye na ogwe, akara ma obu oriọna oriọna. Ihe osise a esighi na sayensị ma ọ bụ physics, ihe ịga nke ọma ha na-adabere na ọnụ ọgụgụ ndị sonyere n'ahịa na-achọpụta ha.
Chartdị usoro ihe osise abụọ ahụ dị ka ndị a:
Chakpụrụ Chart na-aga n'ihu: Continukpụrụ na-aga n'ihu na-agụnye usoro ọkọlọtọ, usoro ihe eji egwu mmiri, na usoro triangle - patternkpụrụ a na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta ohere ka ha wee nwee ike ịga n'ihu na-emekarị.
Verskpụrụ Chart Reversal: Otu okwu a na - ahụkarị bụ “omume a bụ enyi gị ruo mgbe ọ gwakọtara”. Kpụrụ ntụgharị na-anwa ịchọta ebe ọnọdụ gwụchara, yabụ kpamkpam nke na-aga n'ihu usoro. Ebumnuche ebe a bụ ịchọta ohere iji zụọ ahịa na ngbanwe nke otu ụdị.
Fewfọdụ n'ime usoro mgbanwe ndị a na-ejikarị:
isi na ubu
Patternskpụrụ ndị a na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi eziokwu eserese ụkpụrụ na-arụ ọrụ gafee a dịgasị iche iche nke oge okpokolo agba, dị ka ha bụ eziokwu (a ugboro ugboro ụkpụrụ, n'etiti nnukwu price mmegharị).
Nkwenye zuru oke nke ndị ahịa ahịa bụ na ọnụahịa na-egosi ozi niile dị mkpa dị ka uru ezi uru, yana mmetụta ahịa. Kpụrụ eserese na-amụ klaasị ọ bụla, site na ego, ebuka, agbụ na ngwa ahịa na mkpuchi.
Chart Nlereanya Psychology
Akwukwo akparamaagwa nke oma bu ike na-achu maka usoro eserese. Ahịa niile na usoro ha gosipụtara site na nrụgide ịre na ịzụta (iji ntuziaka eserese). Ike obibi nke na-ekere òkè dị ukwuu n'ịkpụzi ego ndị a bụ n'ezie ọkọnọ na mkpa.
Iwu zuru ụwa ọnụ nke ọkọnọ na ọchịchọ yana mmetụta uche na-egosi na ọ baghị uru oge ị kpebiri iji zụọ ahịa eserese ahụ, nke a bụ n'ihi na ụmụ mmadụ ga-enye iwu ahụ.
N'ebe a, anyị edepụtala ụzọ atọ na-eduga n'usoro dị elu maka usoro eserese azụmaahịa:
Mgbe ị na-eme mkpebi oge ị ga-achọ ịzụ na ya, na-echeta mgbe niile banyere ụdị onye ahịa ị bụ.
Dịka ọmụmaatụ, eserese kwa ụbọchị, na 4hr nwere ike iji mee ka ahịa ahịa, ma ọ bụ maka na-azụ ahịa.
A na-ejikarị eserese 5 na nkeji 15 mee ihe scalping ahịa, na ụbọchị trading.
Oge izu - kwa ọnwa dị mma maka ahia ọnọdụ
Dabere na oge ị họọrọ, ị kwesịrị ị mata akara kachasị maka oge ahụ.
Mgbe ị hụrụ akara ngosi na - ewu ewu, ị nwere ike ịchọpụta usoro eserese iji oge ahịa.
Ya adịla mgbe ị ga-ere azụmaahịa dabere na usoro eserese, ọ gwụla ma ị nwere usoro nke edobere dịka ihe ikpeazụ ịchọrọ bụ ịkwụsị azụmaahịa dabere na mmetụta gị.
Akwụkwọ na Trading Books Nkọwa na Ndepụta
Y’oburu n’icho ikuziri onwe gi ihe ozo n’oru ahia, anyi chikotara akwukwo ndi n’enye aka nke anyi chere na ha nile aghaghi igu.
🥇 forzụ ahịa maka ibi ndụ: Phycology, Trading, Tactics, Management Money - nke Alexander Elder dere
Akwụkwọ a na-emetụta 3 M; ego, uche, na usoro. Site na 'ire ahia ka i nweta ndu' i nwere ike ichota ha ato.
Akwụkwọ a dị mma maka ịdọ aka ná ntị gị, na-akọwa ụzọ ahịa ahịa, ma na-eduzi gị ka esi edozi ego na akaụntụ azụmaahịa gị.
Bata n'ime Tralọ Ahịa M: Otu Nduzi Zuru ezu maka --zụ ahịa - nke Alexandar Elder
Dr Alexander na-ekpuchi ihe niile site na njikwa oge niile, atụmatụ na ịzụ ahịa ego, na ịchọta akara ngosi nwere ike ibute uru na-agbanwe agbanwe.
Site na ahia ahia rue na usoro ihe omumu, akwukwo a iji mee ka onu ahia obula n'ime onye ahia.
🥇 dingzụ ahịa na Mpaghara: Master Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winness Attitude - by Mark Douglas
Onye dere akwụkwọ a, Mark Douglas, bụ onye ahịa maara ihe nke ukwuu, onye ndụmọdụ ụlọ ọrụ na onye na-azụ ahịa azụmaahịa.
Enwere isi okwu ise nke akwụkwọ a, iji nye ndị ahịa nghọta ka mma banyere onwe ha na otu ha si azụ ahịa. Ebumnuche ebe a bụ inyere ndị ahịa aka ma a bịa n'ịhọrọ ngwaahịa, akụkọ ifo banyere ahịa, ma nwee olile anya ịbawanye uru
Na-azụ Wayzọ Gị Maka Nnwere Onwe Ego - nke Van K. Tharp dere
Nke a bụ echiche ziri ezi banyere otu esi azụ ahịa n'ahịa, yana nnukwu nkọwa nke ọnyà ndị nkịtị, na ndụmọdụ banyere ịbụ onye ahịa na-aga nke ọma, akwụkwọ a bụ ezigbo ihe ọmụma.
Na enweghị usoro ọ bụla, isi akwụkwọ a na-elekwasị anya bụ ndị a: Otu esi emepụta usoro nke gị, otu esi emeghe uche, usoro ịpụ na atụmanya dị mma.
🥇 Japanese Candlestick Charting Techniques - nke Steve Nison
Steve Nison nwere ọtụtụ afọ na ụdị ọhụụ a na-ewu ewu. Akwụkwọ a gosipụtara ihe niile site na iwu ihe ndọba oriọna na ịghọta usoro dị iche iche na usoro dị iche iche nke teknụzụ, akwụkwọ a bụ ezigbo agụmakwụkwọ.
Nke a bụ mbipụta nke abụọ, ma kọwaa ihe niile gbasara okwu Layman maka gị bụ ndị na-amaghị ebe ha ga-amalite site na eserese oriọna!
Ndị na-ere ahịa kacha mma na nyiwe maka Ahịa Ahịa Ahịa
Ọ bụrụ na ị jisiri ike mee ya ugbu a - ị kwesịrị ịmara ugbu a ihe ọnụahịa azụmaahịa bụ, yana gịnị kpatara ọtụtụ ndị ahịa nwere ọ swearụ ji a swearụ iyi dịka atụmatụ dị mkpirikpi na ogologo oge.
Dị ka ndị dị otú a, njedebe ikpeazụ nke ihe mgbagwoju anya bụ ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị ị nwere ike iji usoro ịzụ ahịa azụmaahịa gị ọhụrụ mụtara. N'okpuru ị ga-ahụ nyiwe ise ọkachasị - ha niile na-enye mkpokọta klaasị akụnụba, ụgwọ dị ala, yana usoro nhazi usoro siri ike.
eToro bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke dị mma maka ndị ị na-amalite n'ụwa ahia. Ikpo okwu na-eme ka ọ dị mfe ịmepe akaụntụ, nkwụnye ego, yana n'ezie - tinye ịzụta na ire ọnọdụ.
Karịsịa, eToro na-enye atụmatụ ịzụ ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe gị nke na-enye gị ohere isoro ndị ọzọ na-etinye ego na-ekwurịta echiche. Ọzọkwa, ị na - edepụtakwa ahịa ndị ọrụ ndị ọzọ na saịtị ahụ - na - enye gị ohere ịzụ ahịa na - agabiga.
AVATrade bụ oke nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ego azụmaahịa. Onye na-ere ahịa na-enye nkwado zuru oke maka MT4 - nke ị nwere ike iji site na akaụntụ ngosi nke ikpo okwu. Mgbe ahụ, mgbe ị dị njikere ịzụ ahịa na ọnọdụ ahịa ndụ, ị nwere ike ịga n'ihu imeghe akaụntụ ego ezigbo.
AVATrade anaghị akwụ ụgwọ ọrụ azụmahịa ọ bụla, na mgbasa na-adị oke ala. N'ezie, ị nwere ike ịzụ ahịa ụzọ abụọ dị mkpa na mgbasa nke naanị 0.9 pips, nke na-asọ mpi. Nke kachasị mma, a na-enye ndị ahịa ọhụụ nnabata maka ịbanye naanị!
Na nchịkọta, ọnụ ahịa azụmaahịa na-akụrisị ọtụtụ akwụkwọ akwụkwọ - ka ọ na-anwa ịkpọghachi gị isi. Nke ahụ bụ ikwu, nkwupụta ahụ na-akụzi ịdị mfe - ọ bụrụhaala na ị attentionara ntị n'ihe na-eme ebe a na ugbu a - na-emegide ilekwasị anya naanị na oge gara aga.
Dị ka ndị dị otú a, anyị nwere olile anya na site n'ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị n'ụzọ zuru ezu, ugbu a ị maara nke ọma ihe ọnụahịa azụmaahịa bụ, yana ihe kpatara o ji dị oke nkpa iji rụchaa ogologo oge.
Kedu ụdị azụmaahịa ahịa azụmaahịa dị mma maka?
N'ọtụtụ oge, ịzụ ahịa ihe ọnụahịa kacha mma maka azụmaahịa ogologo oge. Nke a nwere ike, dịka ọmụmaatụ, ilekwasị anya n'ịzụ ahịa. Agbanyeghị, ọtụtụ ga - arụ ụka na ndị ahịa ụbọchị ahụ nwekwara ike iji ọnụ ahịa azụmaahịa mee ihe zuru oke - dị ka ọtụtụ amụma ahụ siri dị.
M ka kwesiri ịmụ nyocha ọrụ aka?
Na nkenke - ee, nyocha nyocha ga-arụ ọrụ kachasị na mbọ azụmaahịa gị ogologo oge.
Kedu akụ ọ na - eme atụmatụ azụmaahịa bara uru?
Ahịa omume trading dị mkpa niile akụrụngwa klaasị. Ka emechara, ọ bụ tiori - na bụghị a atichazi usoro.
Omume ahia ọ na-adabara ndị mbido?
Ee na mba. N'otu aka, ọnụ ahịa ihe bụ atụmatụ nke ndị ahịa nwere ụdị na nha niile kwesịrị iji. Site na nke a, ọ ga - ewe ogologo oge iji mara - ya mere mụta ihe!
Ebee ka m nwere ike ịmụtakwu banyere ịzụ ahịa ọnụahịa?
Anyị edepụtara ụfọdụ akwụkwọ azụmaahịa ama ama ama ama dị ugbu a n'ahịa na-aga n'ihu na ibe a.
Ihe ahia ahia ahia ọ bụ maka ịbanye n'ahịa?